Beauty Rhythm UK & USA Direct Products. Simple Kind To Skin Moisturising
Simple Kind To Skin Moisturising
Limited Edition Facial Wash 150 ml
Simple ရဲ့ Kind To Skin Moisturising Facial Wash (Limited Edition) ဟာ မျက်နှာအသားအရေကို ထိထိရောက်ရောက်သန့်စင်ပေးပြီး ချွေးပေါက်များကိုပိတ်စေနိုင်တဲ့ဖုန်မှုန့်၊ အဆီနဲ့ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေကို အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းမဖြစ်ဘဲ သန့်စင်စေပါတယ်။
UK နိုင်ငံရဲ့ Simple အမှတ်တံဆိပ် မျက်နှာသစ်တွေက အသားအရေကို ရေဓာတ်အပြည့်အဝဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် နူးညံ့ချောမွတ်စေပြီး အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်နော်။
ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့ အသားအရေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ဗီတာမင် B5 နဲ့ ဗီတာမင် E တို့ကို ၃ ဆ သန့်စင်ထားတဲ့ရေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။
အရေပြားဆေးပညာအရ သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ အလွန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်များသာမကဘဲ ဘယ်အသားအရေပိုင်ရှင်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။
၁၀၀% ဆပ်ပြာလုံးဝမပါဝင်ဘဲ သဘာဝပစ္စည်းများနဲ့သာ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ မျက်လုံးတဝိုက်လို ထိခိုက်လွယ်တဲ့နေရာတွေ ထိမိရင်တောင် အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူးနော်။ ဒီမျက်နှာသစ်လေးက မရှိမဖြစ်သုံးသင့်တဲ့ Simple ရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုပုံကတော့ လက်ထဲမှာ အနည်းငယ်ယူပြီး အမြုပ်ထအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ရေဆွတ်ထားတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ အမြုပ်များနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးပြီး ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့ ပြန်ဆေးချရမှာပါ။ တစ်ကယ်လို့ မျက်လုံးထဲဝင်သွားရင်တော့ ရေနဲ့သေသေချာချာပြန်ဆေးပေးပါနော်။
Simple ရဲ့ Kind To Skin Moisturising Facial Wash (Limited Edition) ဟာ မကျြနှာအသားအရကေို ထိထိရောကျရောကျသနျ့စငျပေးပွီး ခြှေးပေါကျမြားကိုပိတျစနေိုငျတဲ့ဖုနျမှုနျ့၊ အဆီနဲ့ မိတျကပျအကွှငျးအကနျြတှကေို အသားအရခွေောကျသှခွေ့ငျးမဖွဈဘဲ သနျ့စငျစပေါတယျ။
UK နိုငျငံရဲ့ Simple အမှတျတံဆိပျ မကျြနှာသဈတှကေ အသားအရကေို ရဓောတျအပွညျ့အဝဖွညျ့ပေးတဲ့အတှကျ နူးညံ့ခြောမှတျစပွေီး အစိုဓာတျဖွညျ့တငျးပေးပါတယျနျော။
ရဓောတျပွညျ့ဝစဖေို့ အသားအရအေတှကျ အကြိုးရှိတဲ့ ဗီတာမငျ B5 နဲ့ ဗီတာမငျ E တို့ကို ၃ ဆ သနျ့စငျထားတဲ့ရနေဲ့ ပေါငျးစပျထုတျလုပျထားတာပါ။
အရပွေားဆေးပညာအရ သိပ်ပံနညျးကစြမျးသပျထားပွီးသားဖွဈလို့ အလှနျထိခိုကျလှယျတဲ့အသားအရပေိုငျရှငျမြားသာမကဘဲ ဘယျအသားအရပေိုငျရှငျမဆို အသုံးပွုနိုငျပါတယျနျော။
၁၀၀% ဆပျပွာလုံးဝမပါဝငျဘဲ သဘာဝပစ်စညျးမြားနဲ့သာ ထုတျလုပျထားတာမို့ မကျြလုံးတဝိုကျလို ထိခိုကျလှယျတဲ့နရောတှေ ထိမိရငျတောငျ အန်တရာယျမရှိနိုငျပါဘူးနျော။ ဒီမကျြနှာသဈလေးက မရှိမဖွဈသုံးသငျ့တဲ့ Simple ရဲ့ရောငျးအားအကောငျးဆုံးပစ်စညျးဖွဈပါတယျ။
အသုံးပွုပုံကတော့ လကျထဲမှာ အနညျးငယျယူပွီး အမွုပျထအောငျပွုလုပျပါ။ ရဆှေတျထားတဲ့မကျြနှာပျေါမှာ အမွုပျမြားနဲ့ နှိပျနယျပေးပွီး ရကွေကျသီးနှေးလေးနဲ့ ပွနျဆေးခရြမှာပါ။ တဈကယျလို့ မကျြလုံးထဲဝငျသှားရငျတော့ ရနေဲ့သသေခြောခြာပွနျဆေးပေးပါနျော။
Copyright © 2020 Beauty Rhythm. All rights reserved.